HETSIKA FARAN’NY TAONA :: Mangingina ny fety hanaovam-beloma ny taona 2018 • AoRaha
HETSIKA FARAN’NY TAONA Mangingina ny fety hanaovam-beloma ny taona 2018
Telo andro sisa dia hivalona tanteraka ny taona 2018. Raha mitaha amin’ny zava-nisy tamin’ireo taona maro- maro teo aloha, somary nangingina ny fety aman-danonana mamarana ity taona ity.
Na ireo dokam-barotra aza vitsy dia vitsy ary tara vao nanomboka. Nisy ny mpanakanto hanafana ny lanonan’ny faran’ny taona any ivelan’i Madagasikara, ary maro dia maro izy ireo tamin’ity indray mitoraka ity. Ho an’ny mpanakanto efa fanta-daza sy efa manana ny toerany io, fa somary mifanohitra amin’izay kosa ny an’ireo mpanakanto tsy mbola fantatra loatra. Na izany, mivelatra safidy.
Nitombo isa ireo toerana fanaovan-danonana, indrindra eny amin’ny tanàn- dehibe sy ny manodidina. Saika ahitana “espace” avokoa ireo tanàna lehibe lalovan’ny lalam-pirenena. Tsy vitsy ireo mpanakanto mpanafana lanonana no hanentana amin’ireny toerana ireny.
Raha ny zava-nisy tato anatin’ny dimy taona, dia misy amin’ireny tarika manafana lanonan’ny faran’ ny taona ireny no niorina na nitambatra vao haingana. Azo lazaina hoe nampiraisin’ ny talenta sy ny traikefa ka mora sy tsy manano sarotra azy ireo intsony ny fana- tanterahana fanafanana sehatra. Anisan’ny tsikaritra nandritra izay taona vitsivitsy lasa izay ihany koa ny paikady fanao amin’ny fiarahana manafana fety amin’ny vanim-potoana toy itony. Olona vitsy ny eny an-tsehatra kanefa mahavita maneho karazan-javakanto maro, toy ny hoe sady mpihira no mpanentana.
FANENJEHANA DAHALO :: Zandary roa naratra voatifitra teo amin’ny lohany sy ny tanany